Valiny haingana: Inona no raketin'ny Testamenta Taloha ao amin'ny Baiboly?
Sokajy: Ny teolojia 0
Inona avy ireo bokin’ny Testamenta Taloha ao amin’ny Baiboly? Izy io dia voaforon’ireo boky dimy voalohany ao amin’ny Testamenta Taloha: Genesisy: bokin’ny fiaviana. Eksodosy: Bokin'ny…
Inona no tian’ny Baiboly holazaina rehefa milaza izy io?
Inona no dikan’ny tenin’Andriamanitra ao amin’ny Baiboly? Ny Baiboly amin’ny maha-boky azy dia “Tenin’Andriamanitra”, satria ny fiainana dia “Tenin’Andriamanitra” teo aloha. Izahay izy ireo…
Valiny tsara indrindra: Inona no lazain’ny Baiboly momba ny lainga?
Inona no atao hoe lainga amin’Andriamanitra? Ny lainga, noho izany, dia ny tsy te hanaiky na hamela ny tenany ho hazavain’ny fahamarinana sy ny fitiavan’Andriamanitra. Ny Ntaolo…
Valiny tsara indrindra: Inona no dikan’ny hoe mamitaka araka ny Baiboly?
Inona no dikan’ny hoe mamitaka ao amin’ny Baiboly? Famaritana ny lainga sy ny fitaka Ao amin’ny 1 Jaona 2:21 Andriamanitra dia milaza amintsika fa tsy misy lainga afaka mivoaka avy amin’ny fahamarinana. Araka ny…
Inona no atao hoe fahazotoana ao amin’ny Baiboly?
Inona no atao hoe olona mazoto? Mitandrema, marina ary mavitrika. 2. adj. Tsy ho ela, haingana, haingana amin'ny hetsika. Inona no dikan’ny hoe mikatsaka amim-pahazotoana?
Inona no ambara ao amin’ny Baiboly?
Inona no lazain’ny Baiboly? Ny Baiboly koa dia boky izay tsy azo vakina raha tsy eo amin’ny fiainan’ny fiombonan’ny finoana,…
Inona no atao hoe Syria ao amin'ny Baiboly?
Inona no dikan’ny teny hoe Syria ao amin’ny Baiboly? Ny teny Syriana dia manondro ny mponina na ny fitenin'i Syria. Izany dia avy amin'ny teny grika Συρία (Syria), avy amin'ny Asyria…
Aiza ny voaloham-bokatra resahina ao amin'ny Baiboly?
Inona ny scoop? 1. sf Vokatra voalohany na vokatry ny zavatra iray. 2. Ny vaovao voalohany azon'ny mpanao gazety momba ny zava-misy na zava-nitranga dia ny…
Valiny tsara indrindra: Iza moa i Miriama ao amin’ny Baiboly?
Inona no fahotan’i Miriama? Nosazin’i Jehovah tamin’ny habokana i Miriana. Inona no nitranga tamin’i Miriama anabavin’i Mosesy? Nanomboka teo dia nanjavona i Maria noho ny…
Fanontaniana: Inona no dikan'ny Ainhoa ​​​​ao amin'ny Baiboly?
Inona no dikan'ny anarana hoe Ainhoa ​​​​ao amin'ny Baiboly? Ny dikan'ny Ainhoa ​​​​dia "ilay voafidy", ny dikan'ny Ainhoa ​​​​dia avy amin'ny virjiny (Virjinin'i Aránzazu...
1 2 ... 7,391 Manaraka
Inona no lazain'ny Baiboly momba ny mpandoka?
Impiry impiry ny teny hoe vavaka no miseho ao amin’ny Baiboly?
Inona no tsapan'ny Krismasy?
Hafiriana no tsy nisy ny fampanantenana ny Fanahy Masina?
Fa maninona no lafo ny pataloha jeans True Religion?
Ny fanontanianao: Iza no nanome antsika ho Reny Maria Virjiny?
Fanontaniana matetika: Inona avy ireo fahagagana nataon’i Jesosy teto an-tany?
© 2022 Synoda